Xiaomi Mi 11 Ultra ka edozichara nke ozo | Gam akporosis
Xiaomi Mi 11 Ultra leaks na ihuenyo nke abụọ na azụ
Fourbọchị anọ gara aga, ọhụrụ Xiaomi Mi 11 batara n’obodo anyị y awa ole na ole gara aga, onye ga-abụ nwanne nwoke okenye ahụ leaked, na Mi 11 Ultra ma jiri igwefoto mbugharị 120X ya na ihe ga - abụ ihuenyo nke abụọ.
Ewezuga ya nke a Mi 11 Ultra, a na-atụ anya ụlọ ọrụ China, nakwa na ọ na-eche ndị ọhụrụ si United States, ọ kwadebela ihe ga-abụ mmalite nke Mi 11 Lite na Mi 11 Pro.
Ugbu a anyị nwere ihihi ahụ si a youtuber onye ndabara ọma na-agbalị ihe ọhụrụ Xiaomi M11 Ultra nwere akara ngosi M2102K1G, nke ejiri ya na onye ọzọ sitere na ụlọ ọrụ nke ECC na BIS kwadoro.
Ihe ndi ozo banyere ụdị a nke ultra nke Mi 11 mere ka o doo anya na ọ ga-enwe mbugharị 120x na-igwefoto dị ka nke bu ya ụzọ, dị nnọọ ka 67W wireless Nchaji. Ma ọ bụ na anyị enweghị ike ileghara nsụgharị nke oyi akwa MIUI a hụrụ na nkwụsị a na nke ahụ hapụrụ anyị na 12.5.
A Mi Ultra na Ejiri igwefoto ahụ dị ukwuu na azụ na isi ihe mmetụta 50MP, ihe mmetụta 48MP sara mbara-akụkụ ya na ihe mmetụta periscope nwere otu ọnụ ọgụgụ megapixels. Anyị nwere ike ịghọta na Xiaomi abawanyela ngwa anya site na 5x ruo 10x na ụdị ọhụụ ọhụrụ a.
Iji rụchaa anyị na-ahapụ nkọwa na ihuenyo nke abụọ dị na azụ, dị obere ma na-enye gị ohere ịmepe ngwa ọ bụla site na ohere ahụ dịka ị nwere ike ịhụ na onyonyo ahụ.
Ihe ndi ozo nke youtube a ghapuru bu 6,8 ″ OLED curved ihuenyo na WQHD + mkpebi nwere ume ohuru nke 120hz, 20MP n'ihu igwefoto, Corning Gorilla Glass Victus maka nchekwa, IP68 iguzogide mmiri na ájá, batrị 5.000mAh, Harman / Kardon na-ege ntị ndị ọkà okwu, Qualcomm Snapdragon 888 mgbawa na ọsọ ọsọ dị iche iche maka eriri 67W, 67W ikuku, na 10W agbara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi 11 Ultra leaks na ihuenyo nke abụọ na azụ
Lelee TV na laptọọpụ
Ọ bụrụ na ị nwere Galaxy S21 na batrị gị anaghị ejide ka ọ dị na mbụ, ịnọghị naanị gị